Maitiro ekuita kumashure kutarisa usati wahaya
Kubhadhara kwakashata kune chero bhizinesi rakaipisisa.
Kwete ivo chete vanopambadza zviwanikwa zvekambani, asi zvakare vanoisa panjodzi kuchengetedzeka kwevashandi nevatengi.
Kukwereta chirevo chekare, "apuro yakaipa inoshatisa munhu wese".
Zvinosuruvarisa, maapuro akashata aya anotiza kuongororwa kwevanyanzvi vazhinji vanotsvaga nekuvata panotangazve. Nzira iri nani yekudzura ava vakaipa sarudzo ndeyekuongorora kumashure uko kuchazadza kuburikidza nenhoroondo yemumiriri wese senge chaiyo sleuth.
Izvo Zviri Nyore Zvikamu zveChechi Yekutarisa
Haufanire kubuda zvese kana uchiita kutarisa kumashure.
Kana iwe uchingo ongorora vavhoterwa vekupinda-chikamu chinzvimbo, haufanire kuita ese kumashure anotarisa kumberi. Saizvozvo, kana iwe uri padanho rekutangaNezve maitiro ekusarudza kuongorora vakawanda vanyoreri, kubhadhara yakazara nhoroondo nhoroondo inogona kunge isingashande zvachose.
Muzviitiko zvese izvi, kuzivikanwa kwekuzivikanwa kwakakwana. Kusiyana nedzimwe nhoroondo dzakaomarara, kuzivikanwa kwechitupa kunogona kupa mhedzisiro yekutarisa kumashure pakarepo kana mukati mezuva. Zvese zvaunoda izita remunhu anenge achinyorera, nhamba yekuchengetedzeka munharaunda uye zuva rekuzvarwa uye wechitatu-bato anogona kudzosera mibairo yakakosha kwauri.
Intelius ndiye anotungamira mupi anogona kuitisa Unlimited kumashure macheki emwedzi wakatarwa . Iwo ekutanga mamiriro ekuti anotarisa anopa ruzivo pamusoro pebasa, dzidzo, zvinyorwa zvematsotsi, muchato, uye chero mhosva, kubhuroka kana ropafadzo dzakabatana nezita rayo.
Mishumo ishoma asi inokwana kudzikisira vamiriri vako usati waenderera kumishumots yakakwana asi yakawanda nguva inopedza.
Izvo Zvakaomarara Zvikamu zveChechi Chekuongorora
Ongororo yekumashure inovharwa nemitemo yemubatanidzwa, yenyika nedunhu inowanzo kuwanda.
Zvinowedzera kuoma kana kambani ichibatira munzvimbo dzinoshandiswa mitemo zvakasiyana. Semuenzaniso, nepo imwe nyika ichirambidza kuwana mamwe marekodhi ematsotsi, imwe nyika inongogumira kuti marekodhi aya anowanikwa riini uye sei.
Imwe nzira yekubuda muiyi bumbiro repamutemo ndeyekuona kuti kambani inotevedzera zvakanyorwa zvekutarisa kumashure kubva pakutanga. Iyi seti yenhungamiro inogona kugadzirwa nerubatsiro rwemu-mumba gweta rezvemutemo kuona kusagadzikana mukuitiswa kwekutarisa kumashure, nepo ichive nechokwadi chekuteerera nemitemo iripo.
Kana iwe uchisefa vanyoreri kubva kunopfuura nyika imwe, kune vamwe zvakare vanotengesa tKumashure kunoongorora seGoodHire iyo inogona kurerutsa maitiro ako GoodHire ine yakavakirwa-mukati Yakashata Reaction kufambiswa kwemabasa, izvo zvinongoreva kuti inogona kungoziva yega nzvimbo yebhizinesi uye nenzvimbo yeanokumbira. Zvichienderana neruzivo urwu, inoratidza mitemo inopindirana yozoshandisa mutemo wakaomarara unoshanda kumatunhu ese.
Nhanho 1: Gadzira yekumashure cheki mutemo
Inopokana kumashure macheki anotendeuka chero bhizinesi kuita magineti ematare. A yakanyorwa kumashure yekutarisa mutemo inodzivirira izvi kuti zviitike nekuti inova nechokwadi kuti munhu wese ari papeji rimwe chete.
Nekongiri seti yematanho aripo, vanoita sarudzo huru vachange vachienderana nerudzii rwekutarisa kumashure kuti vaite, kunaani kuchaitirwa uye seimhedzisiro ichadudzirwa.
Sarudza mhando dzekutarisa kumashure kuti dziite
Kutangira-basa kuongorora kunouya nenzira dzakawanda. Zvichienderana nesaizi uye nemhando yebhizimusi rako, unogona kuita zvese kana zvimwe zveichi cheki.
Rudzi rwekumashure cheki iwe yauchazoshandisa ichasiyanawo nechinzvimbo. Semuenzaniso, kuongororwa kwechikwereti kunogona kudiwa kune zvinzvimbo zvinoda kungwara kwemari, nepo uchityaira marekodhi anotariswa seasinga gadzirisike kune vashandi vanenge vachityaira mota dzekambani.
Kana uchinyora yekumashure yekutarisa mutemo, tsanangura mamiriro ezvinhu c madhivha achaitirwa, uye kunaani. Heino mhedziso yemhando dzakasiyana dzekutarisa kumashure kuti utange:
Basic Identity Check - iyo inosanganisira kutarisa iyokuvimbika kwenhamba yemunhu anoshanda chengetedzo uye kutsvaga zvese zvakabatana nazvo. Izvi zvinosanganisira zita, alias, zuva rekuzvarwa nekero.
Criminal Record Check - inotsvaga dhatabhesi kuti ione kana munhu abatwa nemhosva yekukanganisa kana kuita zvisirizvo pamatanho ehurumende, ehurumende, pamwe nedhipatimendi. Kusunga marekodhi kunogona kukonzera kutendwa kana kudzingwa basa, asi zvinoenderana nedunhu rako iro rinogona kuverengerwa mumushumo wako. MuCalifornia, semuenzaniso, haugone kuongorora zvinyorwa zvekusungwa kunze kwekunge zvaguma nekutongwa. Mhosva dzekuongorora mhosva dzinosanganisirawo kutsvaga kweakawanda-nyika mamiriro ezvepabonde anyoresa uye magandanga ekuona mazita muUnited States.
Civil Court Ongororo - inoratidzira chero asiri ematsotsi ayo mukwikwidzi ave achibatanidzwa. Inogona kurairwakudzvinyirira zviito, kutyorwa kwekodzero dzevanhu kana zvidiki zvakanyoreswa nehurumende yemubatanidzwa. uye matare eruzhinji.
Kiredhiti Nhoroondo Yekutarisa - inosungirwa pre-basa cheki kune vanyoreri vanotsvaga mabasa muindasitiri yemari. Kuzvidavirira mune zvemari chinhu chinodiwa pakubata zvinhu zvevamwe, izvo zvinoita kuti rudzi urwu rwekumashure rwuongorore nzira yakavimbika yekutarisa vavhoterwa vanonyorera basa reakaunzi kana chinzvimbo mubhengi kana brokerage. Yechikwereti nhoroondo cheki inounganidza ruzivo nezve kubhuroka, kuunganidzwa kwemari dzisina kubhadharwa, mitero yemitero uye nhoroondo yekubhadhara inosanganisirwa nezita remunyoreri.
Mota YeMotokari Mota : Inopa ruzivo nezve hunyanzvi hwekutyaira kugona. Kuongorora rekodhi yekutyaira kunosimbisa huchokwadi hwechitambi chekutyairayemumiriri. Inotaurawo nezve chero kutyorwa kwemugwagwa uye kumiswa, zvichipa vashandirwi mufananidzo wakajeka wehunhu hwemunhu munzira. Icho chinosungirwa pre-basa kuongororwa kwevamiriri vanozotyaira mota-dzine mota kune bhizinesi zvinangwa.
Jobho Verification - ndiyo yekutanga mutsara wekuzvidzivirira kune vanyoreri vanowanzo shongedza kwavo kutangazve kana kusiira ruzivo rwakakomba kufurira kuhaya zvisarudzo zvakavanakira. Kuti uzviise zvakapusa, ichi chiitiko chekutarisa icho chinovimbisa kuti vanyoreri vane ruzivo uye vanokwanisa basa sezvavanoti ndizvo. Kuti utarise nhoroondo yebasa remumiriri, vashandi vevashandi vanowanzoonana nevashandirwi vekare kuti vavabvunze zita remunhu anenge achikwikwidza, zuva rebasa, mabasa anoitwa uye kutenderera.mamiriro akakomberedza kuenda kwemukwikwidzi.
Dzidzo Verification : Inoderedza njodzi yekuhaya munyengeri, kunyanya kune manejimendi zvinzvimbo zvinoda madhigirii epamusoro. Izvi zvinoita kuti mukwikwidzi aende kuchikoro chaiko uye akawana madhigirii chaiwo akaratidzirwa pachikamu.
Rondedzero iri pamusoro haina kukwana, sezvo makambani kana mafemu maRecruiters anogona zvakare kushandisa mamwe macheki ekumashure pazvinenge zvichidikanwa.
Hutano kutarisisa sanction cheki, semuenzaniso, inogona kuitwa kuitisa mamiriro ehunyanzvi nezvehutano. Munhu ane runyorwa rurefu rwezviito zvekuranga, kumitisa kana zvirango anogona kunge asiri kungobvumidzwa, asi zvinopa nzwisiso yehunyanzvi hwemumiriri.
Kana iye anenge achinyorera achigara muUnited States asi akambodzidza, akashanda kana kugara kunze kwenyika, kune zvekare macheki es epasirese rekodhi rekodhi kutora zvinyorwa zvakakosha izvo zvingadai zvakarasika
Sarudza kuti ndeapi macheki ekumashure anofanirwa kuitirwa yega yega chikamu chevanonyorera
Havasi vese vanyoreri vanofanirwa kupfuura neseti imwechete yekutarisa kumashure. Mushure mezvose, vashandi vane zvikamu zvakasiyana zvebasa. Iwe haumanikidze mumiriri kuti anyore chinzvimbo chekupinda-nhanho kuburikidza neyakaomarara sarudzo sarudzo iyo vanyoreri ve chinzvimbo chehutungamiriri.
Naizvozvo, zvakakosha kuti utaure zvakajeka mumashure cheki mutemo kwete chete kuti ndeapi marudzi eakafanotangira-basa cheki inoitirwa, asiwo naani. Imwe nzira yekuita izvi ndeye
Semuenzaniso, Chikamu 1 chiri pazasi pehutongi uye nekudaro chinogona kusanganisira vashandi kana makondirakiti vasina mukana wekuita bhizinesi maitiro ekambani. Kuchenesa vashandiinowira muchikamu ichi uye inogona kupihwa basa mushure mekuziva uye mhosva yekuongorora.
Chikamu chechipiri, kune rimwe divi, chinogona kuvhara vazhinji vevashandi vekambani vanoshandisa zviteshi. basa, kutyaira mota dzekambani, uye kuve nekuwana maitiro ekushanda. Naizvozvo, ivo vanofanirwa kuenda kuburikidza neyekuongorora cheki uye mota mota mushumo mukuwedzera kune yakakosha kumashure macheki.
Chikamu chechitatu vashandi vari pamusoro pehutungamiriri nekuti vane mukana wakanangana nekuwana kwakakosha zviwanikwa zvekambani neruzivo Ivo vanosanganisira vemukati ma Auditor, madhipatimendi misoro uye vakuru manejimendi. Kuwedzera kuita basa kunoreva kudzora zvakanyanya. Nekudaro, pamusoro pechekumashure macheki anodikanwa ezvikamu zviviri zvakapfuura, Nhengo 3 nhengo dzichavawo pasi pekutanga-kumwe kuongorora basa.zvepfungwa uye zvakakwana zvakakwana.
Bvunza gweta kuti uone kutevedzwa kwemitemo yevashandi
Kunyora mutemo wekutanga kubva pakutanga pasina kurairwa negweta kana dhipatimendi revashandi vehurumende imuedzo wakamirira. Izvi zvinodaro nekuti chekumashure macheki akafukidzwa nemubatanidzwa, nyika, nemitemo yemuno, uye kutadza kutevedzera chero ipi zvayo zvinogona kukonzera kureba uye kudhura kwematare.
Zvinhu zvinonetsa kune vakawanda-nyika vashandirwi vanofanirwa kubata nemitemo yakawanda inotonga masimba mazhinji. Nerubatsiro rwegweta, mabhizinesi uye mafemu ekutsvaga anokwanisa kuona panowirirana nemitemo iyi uye kuona nzira yekufambira mberi pasina kutyora chero chinhu. ing.
Muchidimbu, heino maitiro ezvemitemo anogona kuve nechokwadi chekuti yako yekumashure yekutarisa mutemo inoenderana nemitemo nemirau:
Chirongwa chekutarisa kumashure. Yakarambidzwaction - Mitemo iri mubhokisi inorambidza makambani kana kutora mafemu kubva kubvunza nezveumiriri wemutsotsi paanokumbira basa rekutanga. Kana iwe uri mudunhu, guta, kana nyika uko kurambidzwa-iyo-bhokisi mirau iri musimba rakazara, haugone kuita cheki yekutarisa kudzamara paine mamiriro ezvinhu ekupa basa Nekudaro, izvo zvinosiiwa zvinogona kushanda zvichienderana nesaizi yebhizinesi uye nenzvimbo yaro. MuWashington D.C., semuenzaniso, mutemo wekurambidza-bhokisi unoshanda chete kumakambani ane vashandi vanosvika gumi nevashanu vanoshanda mudunhu iri.
Maitiro ekuongorora mamiriro ekumashure. Iyo FCRA inoda kuti vashandirwi vape fomu rekubvumidza kune vanonyorera vachivazivisa iwo kuti ongororoimwe nhoroondo ichaitirwa zvinangwa zvebasa. Kana mhedzisiro yekutarisa kwekumashure yakatungamira mushandirwi kuramba chikumbiro chemumiriri, iyo FCRA inodawo kuti mushandirwi atore nhanho nhatu dzakashata maitiro ekuita. Maitiro aya anosanganisira kutumira iye anenge achinyorera kopi yemushumo wekutanga, akamirira iye anenge achinyorera kuti apindure kana kukwidza nyaya, asati azotumira ziviso isingafadzi yekukwirwa.
Zvinyorwa zvematsotsi zvinofanirwa kushandiswa pakutarisa kumashure.
Mitemo yeFederal nemitemo yenyika vanoisa zvirambidzo parudzi rwemagwaro makambani anogona kushandisa kukanganisa kwavo kutora sarudzo. Iyo FCRA, semuenzaniso, inoti nhoroondo yechikwereti macheki anofanirwa kutonga kunze kwekubhuroka mushure memakore gumi uye akabhadhara mitero yemitero mushure memakore manomwe, pakati pevamwe. Commission yeEqual Employment Opportunities (EEOC) inoshandawo Chinyorwa VII yeCivil Rights Act ya1964, iyo inodzivirira vashandirwi kubva mukuita sarudzo yekuhaya inoenderana chete nemhosva yemunhu. zvinyorwa. Kusarura kunogona kukupa dambudziko rakawanda, saka dzivisa kuvimba nezvinyorwa zvematsotsi izvo zvisina chekuita nechinzvimbo icho mukwikwidzi ari kunyorera. Makambani anofanirwa zvakare kufunga nezvehunhu hwemhosva uye nenguva yapfuura kubvira apo munhu anenge apemha apedza mutongo wake.
Senge kuti mitemo yemubatanidzwa haina kuomarara zvakakwana, kune mimwe mitemo yenyika inoenderana navo futi uye inofanirwa kutariswa pakunyora kumashure kutarisa chechetere.
Semuenzaniso, nyika dzinoverengeka dzakarambidza kushandiswa kwemakadhi echikwereti se pre-basa kuongorora. Munzvimbo dzavanorambidzwa chete, mishumo yechikwereti inogona chete kushandiswa kusimbisa maitiro ekuongorora.vavhoti mumabhangi uye mamwe masangano emari.
Nhanho yechipiri: Sarudza Yakavimbika Yekumashure Tarisa Kambani Kana iwe usina kushongedzerwa kuongorora kumashure, kunyangwe kuwana rekodhi rematsotsi padare redzimhosva kunogona kutora chingangoita hupenyu hwese. Nekuda kweizvozvo, vangangoita stellar musarudzo vacharasikirwa nemoyo murefu uye pachinzvimbo vanonyorera kune vanokwikwidza.
Federal, nyika, uye yemunharaunda mitemo zvakare inotonga kumashure kutarisa. Naizvozvo, kunze kwekunge iwe uine-mumba gweta rezvemutemo riripo 24/7, danho repamutemo rinogara riri mhosho.
Neraki, kune vechitatu-bato vatengesi vanogona kubatsira mabhizinesi uye kutora mafemu kutora fungidziro kunze kwekuhayakutarisa kumashure.
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge wakaita, danho rinotevera ndere kutsvaga mutengesi-wechitatu-anotarisa ese ako mabhokisi Kana iwe uine hombe yekuhaya vhoriyamu, semuenzaniso, kune makambani senge Intelius anogona kuzadzisa zvaunoda. Nekubhadhara yakatarwa pamwedzi mubhadharo, Intelius inogona kuburitsa yakatemwa mishumo kune vako vavhoterwa, kusanganisira mazita avo, ma aliase, ruzivo rwekufonera, dzidzo, nhoroondo yebasa, uye marekodhi emhosva, pakati pevamwe.
Intelius inogona kuburitsa mishumo padiki ipapo, saka iyi sarudzo yakanaka kana iwe uchitsvaga yakakosha kumashure macheki. Paunenge iwe wagadzirira zvimwe zvakadzama mishumo, iwe unogona kutarisa kune akanakisa mupi zvichienderana nezviviri zveakakosha maitiro ayo achakurukurwa pazasi.
Sarudza yekumashure yekutarisa kambani ine confoYakabatanidzwa FCRA rmity
Iyo Fair Kiredhiti Kutaurisa Mutemo (FCRA) uripo kuitira kuti usapfuure miganho yekutarisa kumashure. Inotarisa nguva yekuongorora kumashure uye inodzora marekodhi aunogona kushandisa saka vanopomerwa mhosva vanopara mhosva havasarudzwe.
Dambudziko nderekuti nyika dzakasiyana nemaguta anotevera mirawo yeFCRA zvakasiyana. Nekuda kweizvozvo, vashandirwi vanoshandira munzvimbo dzakawanda vanogona kukuwana kwakaoma kufambisa zviri pamutemo mamiriro ekutarisa kumashure.
Iyo FCRA-inoenderana nekambani yekutarisa kumashure inoita zvese zvinorema kusimudza saka makambani anokwanisa kuhaya tarenda repamusoro vasinganetseke nezvekutevedzera. Kana kambani yaunobata nayo ichiti iri FCRA inoenderana, bvunza magwaro anogona kuratidza izvozvo.
Bhizinesi rakanaka ibhizinesi rinopa ongororoyakasarudzika kuitira kuti mumiriri wese awane mukana wakaenzana wekuratidza hunyanzvi hwavo. Iyo zvakare ine yakavakirwa-mukati kufashukira kwemabasa kuitira kuti iwe ugamuchire imwe ziviso kana iye akange aramba kunyorera akagamuchira risati rakashata chiito chiziviso, uye imwe kana iyo yekupedzisira yakaipa yekuzivisa ikapihwa.
Cherekedza kumashure kwekutarisa nguva dzakatarwa
Kumhanya kunoitwa neyechitatu-bato mupi kupa mhedzisiro yekutarisa kumashure kunosiyana zvichienderana nerudzi rwezvinyorwa iwe zvauri kukumbira.
Chekutanga cheki cheki inogona kupedzwa kanenge pakarepo, nepo basa, kudzidziswa uye marezenisi macheki anogona kutora kusvika vhiki. Zvinyorwa zvematsotsi mumatare uko dhatabhesi isina kuongororwa asi zvakare inodzora maitiro, saka ita shuwa kuti mupi anogadza nguva chaiyo kana achiongorora kumashure.
Uyezve lIyo ipfupi yekushandura nguva iri nani, nekuti haudi kurasikirwa netarenda rakakura nekuda kwekunonoka.
Zvisinei, ita shuwa kuti bhizinesi hariburitse mhedzisiro nekukanganisa data kubva pahunhu. Zvakajairika kune vamwe vatapi vekuongorora kuti vatore mapfupi muzita rekuita mari yakawanda munguva pfupi kwazvo yenguva.
Ita shuwa kuti iwe unoita yako yekushingairira paunenge uchisarudza yekumashure yekutarisa kambani zvinoenderana nekukurumidza kutendeuka nguva. Kushandisa otomatiki sisitimu kuburitsa ruzivo kubva pamhepo matsotsi dhatabhesi inowanzo kuve mureza mutsvuku, kunze kwekunge mutengesi anogona kuratidza kuti data iri rinoenderana neiro raanogona kuwana.
Imwe nzira yevabatsiri yekutora mapfupi ndeyekutsvaga chete zita remunhu anokumbira uye nekuregeredza chero mamwe maratidziro avanowana chetee kuchengetedza nguva. Sarudza makambani ane tekinoroji yekudyara anoita tsvakiridzo yakadzika kuti uone mazita akasiyana anehukama nemunhu, kunyanya avo vakashandura mazita avo kungave kuburikidza nekuroora kana kuburikidza nehurumende.
Pakupedzisira, funga kuti kambani inowana sei zvinyorwa. Kune makambani ekuongorora ayo anowanisa mabasa kumabhizinesi ekugadzirisa nzvimbo muIndia nePhilippines kuchengetedza pamitengo yevashandi. Kwete chete ivo vanoita kuti data remumiriri rive munjodzi yekuba chitupa, asi zvakare vanoisa mukurumbira wekambani panjodzi nekubvumira vashandi vasina kudzidziswa kuti vawane mafaira ematare edzimhosva.
Nhanho yechitatu: Gadzirira mukwikwidzi kuongorora pre-basapa. Maitiro acho anofanirwawo kunonoka kudzamara pavapihwa basa rekuita kuti vaone kuti hapana rusaruro kune vakatotongerwa mhosva.
Izvi zvinotarisirwa zvinodiwa kuti zviitwe pachena, zvichiita kuti mapato ese ave nemikana mishoma yekupinda mumatare edzimhosva kana zvinhu zvikasaita pakupedzisira.
Zivisa Munyoreri weIpapo Yemashure Checks
Kambani yekutarisa kumashure isati yagona kuita basa rayo, unofanira kutanga wawana mvumo kubva kune anenge achinyorera.
Ichi chiziviso chinobatsira munzira mbiri. Kana mukwikwidzi akaramba kutora pre-basa bvunzo, zvinoreva imwe dambudziko shoma kubata naro. Kana iye anenge achikumbira akabvuma, izvi zvinogona kuvapa nguva yekuona nekugadzirisa zvisizvo. Izvo zvakare zvinomubatsira iye kugadzirira kufona yakakodzera kuitira kuitira iyo resultats zvaizoratidza zvisina kunaka.
Kuti uwane mvumo yemunhu anenge achitsvaga, anotarisa kumashure anofanirwa kupa iye anenge achinyorera mafomu maviri: fomu kubva
IEqual Employment Opportunity Commission (EEOC) inokurudzira kusanganisira nenzira ye
Kubvuma kutarisa kumashure, iye anonyorera anofanira kunyatsonzwisisa zvakanyorwa pachimiro che
Pamusoro pemafomu maviri ataurwa, anenge achinyorera anofanirawo kupihwa kopi yeFederal Trade Commission (FTC ) gwaro rakanzi "Pfupiso yekodzero dzako pasi peMutemo Wakajeka WeKuburitsa Kiredhiti". Gwaro iri rinoona kuti uyo anenge achinyorera anoziva kuti kodzero dzake dzinochengetedzwa neFCRA uye kuti mushandirwi anosungirwa kuongorora zvemashure pasina kutyora kodzero idzi.
Gadzira mvumo yekupa basa
Kupihwa kwebasa zvichizadzikiswa kweanodiwa macheki cheki anoonekwa se mtsika yakanaka. Izvi zvinonyanya kuitika kana kambani iri kuhaya mumatunhu umo mitemo inorambidza bhokisi inosimbisirwa.
Bharabhokisi rinorambidza vashandirwi kubva pakuongorora pre-basa panguva yekubvunzurudzwa kwekutanga kana usati waita basa rekupa. Mutemo uyu wave kushandiswa kune vashandirwi vakazvimirira mumatunhu akadai seCalifornia, Connecticut, Hawaii, Colorado, Illinois, New Mexico, Vermont, Rhod e Island, neWashington.
Nhanho yechina: Ita Zvekumashure Ongorora
Kutsvaga kumashure kutarisa kune FCRA inoenderana mutengesi kunokutorera mutoro mukuru. Mukupesana, kuita ye-mumba yekuongorora cheki kunoda kuti iwe uve neyako pesheni yekugadzirisa maitiro, pamwe nechikwata chehunyanzvi chekutarisira sisitimu yekugadzirisa.
Zvichienderana nemhando dzedata iwe dzauchazoda kuwana, yekumashure chekients inogona kupedzwa mukati memazuva maviri kusvika mashanu. Sezvambotaurwa, zvakakosha kuti utarisane neyechitatu-bato mutengesi iyo inovimbisa kukurumidza kutendeuka nguva pasina kupa chibayiro chemhedzisiro.
Ita chitupa chekutanga
Chekutanga cheki cheki chinogona kuitiswa padiki ipapo, chero iwe watowana ruzivo rwemunhu anenge achikumbira.
Kuti uite chekutanga cheki cheki, unoda zita remunhu, nhamba yekuchengetedzwa kwevanhu, zuva rekuzvarwa nekero zvemakore manomwe apfuura. Kero idzi dzinodiwa kuitira kuti iyo kambani yekuongorora isarasikirwe nechero mhosva dzekupara dzakanyoreswa kune mamwe matunhu kana mataundi kunze kwenzvimbo yemunyori yazvino yekugara.
Kana iyo data yaiswa mukati mekutarisa chekambani portal yekambani, iyo system inodzosera mhedzisiro inozoona prohaine matanho ekutevera. Kana iko kwekutanga kuzivikanwa chitupa kuchidzosera mhedzisiro mhedzisiro, unogona kusarudza kusaenderera kunhanho inotevera kusvikira nyaya yagadziriswa. Zvikasadaro, iwe unogona kuita zvimwe zvakadzika-kumashure kumashure kutarisa.
Ita zvimwe zvakadzama kumashure macheki
Kune akawanda mapoka evashandi, yakakosha kuzivikanwa chitupa inongova nhanho yekutanga. Kuti ugadzire yakajeka pikicha yehunhu hwemunhu uye nhoroondo, iwe unofanirwa kutarisa kumashure kutarisa uchishandisa dhatabhesi dzakawanda.
Heano mhedziso yezvimwe zveyakajairika zvinhu zvekutarisa kumashure uye izvo zvinowanzo kuve zvinobatanidzwa mune yega yega:
- inosanganisira yakazara kutsvaga kwematare edzimhosva kumatare ehurumende, ehurumende nemadhipatimendi. Vashandirwi vanotarisana nedambudziko rekuwana marekodhiiers kubva kumatunhu akati wandei, asi inokwanisa cheki yekutarisa kambani inogona kupa rubatsiro rwakakodzera.
Civilian Records Check
- inoratidza chero zviito zvine chekuita nebasa zvine chekuita nemumiriri. Iko hakuna kuwirirana pakati pekunyoresa masevhisi ematunhu akasiyana, saka rubatsiro rwemberi yekutarisa mupi inotsvairwawo zvakanyanya.
Employment, dzidzo uye rezinesi ongororo
- inoitwa kuverengera vanyoreri ndivanoti ndivo. Pamwe chete, macheki ekumashure aya anotora nguva. Iyo data inodiwa kupedzisa iyo verification inowanikwa mune yeruzhinji zvinyorwa, asi munhu ane saini saini anogona kuiwana.
- inosanganisira kuongororwa kwenyaya yechikwereti nhoroondo. Nekudaro, iyo data inorambidzwa kuruzhinji uye zvikwereti zvikwereti hazvi
Mota Mota Rekodhi
: Zvinoreva kutyaira marekodhi anogona kuburitswa kune wepashure cheki mupi ane saini yakasainwa.
Nhanho yechishanu: Tora danho rekuhaya zvinoenderana neshure cheki mhedzisiro
Mhedzisiro yekutarisa kumashure inogona kuve inofadza kana isingafadzi kumumiriri. Sezviri pachena, zviri nyore kuburitsa zvachose basa kupihwa kune vanonyorera vasina mhosva yekutongwa. Asi ko kana mukwikwidzi akakodzera akasatanga kubva pakutanga? Nemitemo yeFCRA, mitemo inorambidza bhokisi uye neEqual Employment Opportunity Commission inorambidza vashandirwi kuramba zvikumbiro zvichibva pazviito zvematsotsi zvakapfuura, mhinduro yacho haisi nyore.
Tumira kumashure cheki mhedzisiro kumatanho akati wandei ekudzokorora
Paunenge uchiita sarudzo yakaoma yekuhaya iyo inogona kukanganisat kuyanana nesangano, anopfuura rimwe chete ziso riri nani pane rimwe. Nekuisa mhedzisiro yekutarisa mhedzisiro kuongororwa kwevakawanda vanoita sarudzo, kutonga kwakasarudzika kunobviswa pamufananidzo. Semuenzaniso, sarudzo inoitwa nemaneja wekuhaya inogona kuongororwa neVP yeHuman Resources, VP yeMabhenefiti uye Kuteerera, kana zvese zviri zviviri. Izvi zvinovimbisa kuti kururamisa uye nheyo yekuenzanirana inotsigirwa uye kuti hapana tarenda rakakura rinotambiswa nedanho risina tsarukano.
Chokwadi, pane dzimwe nguva apo iwe usingakwanise kushandisa zvakaenzana. Kana munhu wacho achikumbira basa rehurumende uye hurumende yemubatanidzwa inotaura zvakajeka kuti haina kuvhurika kune chero munhu akatongerwa mhosva, saka unofanira kutevedzera mutemo. Muzviitiko zvakawanda, zvisinei, bvunzo yezvikamu zvitatu inogona kubatsira.
Inozivikanwawo se "yakatarwa skrini," bvunzo muzvikamu zvitatu ndezvekutarisa chimiro kana kukomba kwemhosva, mamiriro emhosva uye kuti yakaitwa kwenguva yakareba sei. Semuenzaniso, kana munhu akapomerwa mhosva yekubata mbanje achiri kuyaruka, zvingangove zvakachengeteka kuvapa mukana chero bedzi vaine zvese zvinodiwa kuti vazadzise basa. Asi kunyangwe kana mhosva yacho yakakomba zvakakwana kudzivirira mukwikwidzi akasimba kubva mukufungidzirwa nezvebasa, iyo Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ichiri kupa tariro muchimiro chekuongorora kwakasarudzika.
Kupa Yakananga Yega Kuongorora kune Vakarambwa Vanyoreri
Kuongororwa kwakasarudzika kunongoreva kupa vanyoreri vakarambidzwa mukana wekuzvidzikunura. Sekuziva kwako, panogona kunge paine kusarongeka chaiko mumhedzisiro yekutarisa kumashure uye kuongororwa kwakasarudzika kwakapihwa.e iye anonyorera anokwana nguva yekumisikidza zvinyorwa.
Kuti kuongororwa kwakasarudzika kuitwe, vashandirwi vanofanirwa kupfuura nhanho nhatu nhanho yekuita zvakashata. Zvakaipa chiito inzira inofanirwa kuteedzerwa nevashandirwi pavanoramba zvikumbiro mushure mekuwanikwa kwemabhureki enji. Iyo yekumberi yekutarisa kambani inogona kuita inodiwa yakaipa maitiro maitiro achimiririra iwo mushandirwi, asi sarudzo dzakakosha dzinofanira kugara dzichiitwa nemushandirwi.
Heano matanho matatu anodiwa kuti ave nechokwadi chekuti iye anenge achinyorera anowana ongororo yemunhu:
Kutanga, tumira tsamba yakashata yekufanobata tsamba kune iye anenge achizivisa achiudza munhu nezve sarudzo yako uye yekumashure cheki mhedzisiro yakakanganisa mhedzisiro yakaipa. Pamusoro pechiziviso chepamberi pechiito chakashata, unofanirwa zvakare kopi iyokutarisa kumashure, ruzivo rwekutsvaga kune wechitatu-bato mutengesi uyo akaongorora kumashure, uye kopi yeFTC's "Pfupiso Yekodzero Yako Yemutemo" gwaro. FCRA. "
Bvumira nguva yakaringana yekuti mumhan'ari agadzirise mhedzisiro kuitira kuti vagokwanisa kukwidza gakava kana zvichidikanwa. Nepo yakajairwa nguva yekumirira iri mazuva mashanu ebhizinesi, vamwe vanotaura nemitemo yekurambidza-iyo-bhokisi inoda imwe nguva. Ita shuwa iyo yekumashure yekutarisa kambani yaunoshanda nayo inoziva nezve mirau kuitira kuti otomatiki yakashata chiito maitiro anogona kugadziridzwa zvinoenderana. , unogona kutumira ziviso yekupedzisira yakaipa kumumiriri.
Ita sarudzo yekupedzisira yekuhaya
Kana mukwikwidzi akashinga pakuratidza kusava nemhosva, kana mhedzisiro the veKana iyo nhoroondo isiriyo, rega kutumira yazvino yakashata chiito tsamba.
Kana chinzvimbo chakakosha zvakanyanya kukambani, ronga komiti yekukwirira kuitira kuti danho rakakodzera riitwe. Iyi pani inogona kusanganisira vamiririri kubva kumutemo, zviwanikwa zvevanhu, chengetedzo nemamwe madhipatimendi anoonekwa seakakosha mukutora sarudzo kwekambani.
Kana vazhinji vachibvumirana, unogona kufambisa basa uchitumira kumberi uye kudzikamisa njodzi dzechisarudzo nekuita post-hiring kumashure kutarisa.
Iyo Yekutanga Nongedzo kune Vashandi Kudzidziswa
2021-06-22 22:51:48 | Webhusaiti
Kudzidziswa kwevashandi kwakakosha pakuzadza ruzivo uye zvipenga zvetarenda, kugadzirisa mashandiro munzvimbo dzakati dzebhizinesi nemabasa, nekusimudzira kugutsikana kwemabasa uye hunhu. Asi zvirongwa zvevashandi zvakabatikana, vashandi vakapararira, uye tsika dzakasiyana dzekufunda ndizvo zvishoma...
Akanakisa LLC Services
2021-06-22 22:44:13 | Webhusaiti
Vazhinji vezvemabhizimusi vanosarudza kuumba iyo LLC kuti vagadzire kupatsanurana pakati pavo nemabhizinesi avo kubva pakuona kwechisimba. Varidzi vekambani ine chikwereti chakashomeka havazopihwa mutoro wega pazvikwereti zvebhizimusi nematare edzimhosva Kune nzira dzinoverengeka dzekumisikidza iyo ...
Yekutanga Nongedzo kune Landing Peji Kugadziridza
2021-06-22 22:37:15 | Webhusaiti
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveiyo peji rinobudirira rekumhara ndeyeye mutengi mutengi. Mushure mezvose, kana iwe ukasawana vanhu chaivo kuti vauye kumapeji ako pakutanga, kuedza kwako kose kungangokwira muutsi. Sezvo isu tisingakwanise (zviri pamutemo! ) Verenga pfungwa dzevanhu parizvino, vatenges...
Maitiro ekugadzira mushandi wekutumira chirongwa
2021-06-22 22:29:23 | Webhusaiti
Dambudziko rakakura rine vanhu nekugadzira chirongwa chekutumira mushandi chiri kuwana kubudirira kwenguva refu. Kunyange zvirongwa zvekutumira zvichitanga nekuwanda kwekunakidzwa uye kunakidzwa, kuzvichengeta kubudirira munguva pfupi zvinowanzo kunetsa. Mushure mekuverenga maitiro edu ekuti, "unozo...